किशोर सेक्स: हामी यसको बारेमा कुरा नगरी जवान मान्छेलाई तल झेलिरहेका छौं – BRT NEWS
किशोर सेक्स: हामी यसको बारेमा कुरा नगरी जवान मान्छेलाई तल झेलिरहेका छौं
युवाहरू बीचको झन्झटमा केही हप्तामा ह्वाइली बहस गरिएको विषय हो। एउटै अवधिमा, sexting को हाम्रो समझ विकसित भएको छ। नग्न वा अर्ध नग्न छविहरू पठाउँदा मूल रूपमा बुझ्न के लागी अब यौन प्रकृतिको भिडियोहरू र पाठ सन्देशहरू समावेश गर्न विस्तार गरिएको छ।
तथ्याङ्क अत्यन्तै फरक छन् तर सामान्यतया संकेत गर्दछ कि sexting युवा मान्छे बीच धेरै व्यापक छ। रिपोर्टहरूको अनुमान छ कि यी 15% र 40% बीच यो यौन व्यवहारमा भाग लिन्छन्।
युवाहरूको बीच सेप्टेम्बरको प्रवृद्धि बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ, यसले कुशल र प्रभावकारी तरिकालाई कानुनी प्रणाली भन्दा बाहिरको निगरानी गर्न निकै कम प्रगति गरेको छ। वास्तवमा, मितिको धेरै अनुसन्धान मात्र कानुनी रवैयामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ जसले यौनजन्य व्यक्तिलाई जोगाउँछ।
यो महत्वपूर्ण छ, निस्सन्देह, तर अधिक व्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो sexting को केहि अधिक परिचित पहलुहरु को सामना र चुनौती को आवश्यकता हो, सहमति र सह को मुद्दे सहित
यो किनभने शिक्षा कार्यक्रम प्रायः यौन र यौन सम्बन्धको जैविक र भौतिक पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र सामाजिक पक्षहरूको अन्वेषण गर्न विफल। संकीर्ण पाठ्यक्रमले लिङ्ग स्टेरियोटाइपहरूलाई अझ बलियो बनाउँछ जुन यौन, कामुकता र सहमतिको युवा जनहरूको धारणालाई प्रभाव पार्छ (एक कारक जसले अब सेट्टिङ्का लागि केन्द्रीय छ)। इङ्गल्याण्डमा सेक्स सम्बन्धी सम्बन्ध र यौन शिक्षाको लागि अभियान चलाउने सेक्स शिक्षा फोरमका लुसी एम्मर्सनले नोटिस गरे कि सेई भित्र “सबै भन्दा कम” भनेको के हो?
सेक्स एड पारंपरिक, बाइनरी र जैविक हुन्छ। Larisa Rudenko / Shutterstock.com
केहि प्रगति गरिएको छ। उदाहरणका लागि यूके सरकारले अङ्ग्रेजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्यो। प्राथमिक स्कूलहरूमा सम्बन्ध शिक्षामा दिशानिर्देश सुधारिएको छ र माध्यमिक विद्यालयहरूमा सम्बन्ध र यौन शिक्षाको रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ। यस नयाँ पाठ्यक्रम सेप्टेम्बर 2020 देखि अनिवार्य हुनेछ।
नयाँ निर्देशनले विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित अनलाइन सम्बन्धको बारेमा जान्न सुझाव दिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ जब हामीले सांस्कृतिक पन्तलाई कसरी कसरी हेर्छौं कसरी युवाहरूले मात्र संवाद नगर्ने तर हानिकारक व्यवहारमा भाग लिन्छन्। यसमा समावेशका लागि, उदाहरणका लागि, अनलाइन बिफलता र सहकर्मीहरू सहकर्मीहरू समावेश छन्। जबकि sexting चिन्ता को एक मुद्दा को रूप मा ध्यान दिए छ, यो स्पष्ट छैन कि बच्चाहरु को कितना जानकारी प्राप्त हुनेछ। उदाहरणका लागि, सहमति र साथीहरूको दबाबको कारण सेकेन्ड बेल्टको सन्दर्भमा छलफल गरिनेछ
सेक्सको बारेमा कुरा गरौं
रिपोर्टहरूले फेला पारेका छन् कि जवानहरूले उनीहरूको तुलनामा साना उमेरमा sexting सुरु गर्छन्। त्यसोभए, बच्चाहरूलाई जवान युगबाट सेक्टिङ् सहित सम्भावित हानिकारक यौन व्यवहारहरू पहिचान गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
यी कुराकानीहरू संवेदनशीलतासँग हुन सक्छ र सामग्री निर्दिष्ट उमेर दायराहरू समायोजन गर्न अनुकूल गर्न सकिन्छ (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् कि युवा बालबालिकाका लागि एनएसपीसीसीको टक प्यान्ट अभियान)। बच्चाहरु लाई सूचित गर्ने र sexting व्यवहार को बारे मा जवान मान्छे को एम मा पनि नोट मा उल्लेख गरिएको छ।
सहमति पनि एक प्रमुख मुद्दा हो। बालबालिकालाई विभिन्न यौन गतिविधिहरूमा संलग्न विभिन्न उमेर सीमाहरूको बारेमा जान्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, युकेमा, यौन सहमतिको उमेर 16 हो, जबकि तपाईले नग्न छविलाई कानुनी रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ 18। यी आयु सीमाहरू sexting को लागि मुख्य हुन्छन् र युवा मानिसहरूलाई बीचमा ठूलो अनिश्चितता र भ्रमको कारण हुन सक्छ। मैले 16 वर्षमा कसरी कानूनी रूपमा मेरो साथीसँग यौन सम्बन्ध राखेको छु, तर म आफ्नै कानुनी चित्रमा कानूनी रूपमा लिन सक्दैनौं? यद्यपि यो सम्भव छैन कि एक जवान व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दछु
साथै, रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि युवाहरूको बीचमा sexting को एक महत्त्वपूर्ण अनुपात सम्बन्धमा वा छेउमा रहेको उपकरणको रूपमा हुन्छ। ग्रेटर संवाद र शिक्षा कुन सहमतिको सन्दर्भमा र युवा सम्बन्धहरूमा के जस्तो देखिन्छ जस्तो शिक्षा चाहिन्छ। यस्ता मुद्दाहरूमा स्पष्टता प्रदान गर्नाले युवाहरूलाई बीच “अन्वेषण” र “शोषणशील” सेकेक्सिङ व्यवहार बीचको फरक फरक पार्दछ। यो भेद महत्त्वपूर्ण छ।
युवा व्यक्तिहरु बीचको यौन सम्बन्ध जटिल छ: सेप्टेटिङसँग सम्बन्धित सामाजिक र कानुनी समस्याहरू छन्। युवाहरूको बीचमा यो प्रचलनले सहमति, उत्पीडन र “स्वस्थ” यौन व्यवहार सम्बन्धी धम्कीदार सीमाहरूमा योगदान दिएको छ। तर जवान व्यक्तिलाई आपराधिक जवाफ छैन। न त संकीर्ण र सीमित शिक्षा कार्यक्रमहरु को लागी कार्यान्वयन छ जसले केवल यौन व्यवहार को वरदान मा मिथक र स्टेरियोटाइपहरुलाई मजबूत गर्नेछ।
युवा मान्छे को शिक्षित हुनु पर्छ र यौन र यौनता संग सम्बन्धित समस्याहरु को एक विस्तृत श्रृंखला संग संलग्न छ र कसरि सुरक्षित रूप देखि इन्टरनेट नेभिगेट र ओफलाइन र दुवै स्वस्थ सम्बन्ध को रूप मा। यसमा जवान उमेरका जवान व्यक्तिहरूसँग बिस्तारै समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्दै।
जब शिक्षाले उठाएको सबै चिन्ताहरू समाधान गर्न सक्दैन, यो जवान व्यक्तिहरूलाई यौनसम्पर्क र मुख्य अवधारणाहरू समावेश गर्ने सन्दर्भमा सहमतिको सन्दर्भमा स्पष्टता प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
Next अनुभव- सेक्स फ्रि भए धेरैले बिहे गर्दैनथे